MTJIBS WUXUU HESHIISAY INTA AAN KA HELI KARI IN AAD AGITO | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » MTJIBS WUXUU HESHIISAY INTA AAN LAGA HELI KARI INTII AAGITO
Shirkadda taageerada kamaradaha ku saleysan Fort Lauderdale waxay wax ka qabataa kala fogeynta bulshada iyo farshaxanka oo leh qaab
Ku dhowaad laba sano, Michael Taylor, milkiilaha MTJIBS - Fort Lauderdale, shirkadda taageerta kamaradaha Florida, wuxuu rabay inuu ballaariyo qalabka shirkadda xalalka ay u fidin karaan macaamiishooda. Laakiin mudadaas, wuu kari waayey hel nidaamka saxda ah ee lagu maalgashan karo taas oo u dhiganta baahiyaha sare ee warshadaha. Kadib wuxuu arkay nidaamka 'Motion Impossible AGITO system modly dolly'.
"Waxaan si fudud u raadinayey dolly shaqeyneysa oo lagu kalsoonaan karo marka lagu jiro barnaamij toos ah," ayuu yiri Taylor. “Kadib waxaan arkay AGITO oo shaqeyneysa runtiina waan la dhacay. AGITO waxay soo bandhigtay kala duwanaansho wadada iyo dibedda - way sameyn kartaa wax walba oo aan u baahanahay inaan sameyno iyo inbadan… silig la'aan. Marka, waan helnay. ”
AGITO waa nooca ugu horreeya adduunka fog dolly. The AGITO waxay leedahay qaabab badan, oo u oggolaanaysa dhaqdhaqaaq habsami leh oo si tartiib tartiib ah u socda, dhaqdhaqaaqa saxda ah ee dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa xawaaraha sare, dhammaantoodna ku jira hal xalka ugu sarreeya ee la qaadi karo. Iyada oo isbeddel aad u fudud oo dhakhso leh oo ku saabsan dariiqa uu ku dhammaado, AGITO waxaa loo qaabeyn karaa qalliinka wareega ee bilaashka ah ee qaabka Isboortiga, ama dhaqdhaqaaqa saxda ah ee tareennada qaabka Trax. Taylor ugu dambeyntii wuxuu helay nidaam AGITO COMPLETE ah, kaas oo bixiya adeegsiga tareenka dhaqameed iyo adeegsiga dhulal kala duwan, iyadoo leh AGITO Tower oo siisa nidaamka 700mm wiish.
"Dabcan, sida ugu dhakhsaha badan ee aan u helnay AGITO, xirida masiibada ayaa bilaabatay, laakiin taasi waxay ku dhamaatay inay naga faa'iideysato maadaama nidaamka uu yahay mid wireless ah oo bixiya kala fogeynta bulshada qaabeynta," ayuu yiri Taylor. "Waxaan ogaanay inaan si hagaagsan u iibsanay." Xavi Mercado oo ay weheliso, khabiir ku xeel dheer arrimaha kamaradaha ee MTJIBS iyo shirkad, shirkaddu waxay bilowday inay dhiirrigeliso nidaamka.
Shaqada ugu horeysa ee MTJIBS ee nidaamka cusub ee 'AGITO dolly modular system' waxay noqon doontaa NASA iyo bisha May 30keeda oo la bilaabi doono SpaceX Crew Dragon Demo-2 - duulimaadkii ugu horreeyay ee diyaaradeed ee markabkii Crew Dragon iyo markii ugu horeysay ee hawada sare ee hawada sare laga duulo laga soo bilaabo Mareykanka tan iyo finalkii Ujeeddada Hawada Hawada, STS-135, 2011. Shaqada waxay ku timid gudbin laga keenay Motion Impossible ka dib markii shirkadda ay la xiriirtay NASA, maaddaama MTJIBS ay ku taal meel 200 oo mayl u jirta Xarunta Ballaaran ee Kennedy. MTJIBS ayaa mas'uul ka noqon doonta soo qabashada daqiiqada dhaqameed ee shaqaaluhu ay ku galaan gawaaridooda gawaarida kadib markay ka baxeen Neil Armstrong Operations iyo Checkout Building (horey loogu yaqiinay Dhismaha Howlgallada Hawada ee Manned) iyo inay sawiro qaadaan. Ka bixida iyo soo galida gawaarida gawaarida waa rasaas laga yaqaan adduunka oo dhan, oo ku fidsan xilliyadii Gemini, Apollo, Skylab, iyo Space Shuttle. Laakiin markan, NASA waxay rabtay inay sameyso wax ka firfircoon tan digsiga kamarada caadiga ah.
(Toogashada waxaa lagu arki karaa halkan www.youtube.com/watch?v=vAtCOwgSiEo)
Sida laga soo xigtay Mercado, nidaamka AGITO wuxuu ahaa qaybta ugu dhaqsaha badan qalabkooda dhismo. Isku soo wada duuboo wadadii gaariga ayaa dhamaatay, munaaraddii iyo fiilooyinkiina aad ayey u dheereeyeen. Nidaamka xakamaynta fiilada ayaa si fiican u shaqeeyay oo wuu adkaa waqtiga oo dhan. ” In kasta oo AGITO uu shaqeysan karo hal qof, haddana Taylor iyo Mercado labadaba waxay ku shaqeynayeen nidaamka iyadoo Taylor uu wado madaxa kaameradda korkeeda iyo Mercado oo gacanta ku heysa AGITO. "Marka laba qof la joogo, qalliinka si habsami leh ayuu u socdaa, laakiin AGITO waa la siman tahay marka uu ku shaqeeyo hal qof oo adeegsanaya qalabka lugta," ayuu yiri Mercado.
Dhacdooyinka soo socda ee MTJIBS waxay noqon doonaan barnaamijyo abaalmarino kala duwan ah. In kasta oo shirkaddu ay adeegyo u fidineysay labada Telemundo iyo Univision muddo ku dhow 20 sano, barnaamij kasta wuxuu u baahan yahay MTJIBS oo bixisa soo jeedin ku saabsan adeegyadooda maaddaama kuwa wax soo saara ay had iyo jeer raadinayaan habab hal abuur leh oo ay ku qabsadaan bandhigyadooda.
Kuwaas waxaa ka mid ahaa Abaalmarinta Muusikada Billboard Latin 2020 ee Telemundo iyo kan Abaalmarinta Sannadlaha ah ee Latinka GRAMMY® iyo Premios Juventud (Abaalmarinta dhalinyarada) 2020 loogu talagalay Univision.
"Premios Juventud aad buu noogu guuleystey markii aan AGITO kula jaanqaadnay SHOTOVER G1 gyro-xasilloon gimbal, ”ayuu yiri Taylor. “Laakiin AGITO kaligeed waa ka xasilloon tahay nidaamyada kale, xitaa haddii uusan lahayn madax xasilloon. Agaasimayaashu runtii way jecel yihiin AGITO maadaama ay siiso xaddi badan oo dabacsanaan hal abuur leh oo ay weheliso kala fogaanshaha bulshada. Mid ka mid ah agaasimeyaasha ayaa xitaa ku tilmaamay nidaamka inuu yahay 'xidigta bandhigga' maadaama sidoo kale loo adeegsaday kamaradda weyn, taasna waa wax lagu farxo in la maqlo. ”
"Agaasimayaasha waxay ku sii kordhayaan hal-abuurka taxaddarka COVID-19," ayuu yiri Mercado. Dhammaan noocyada cusub waxaa loo qaabeeyay iyadoo looga dan leeyahay in la ilaaliyo hibada iyo farshaxanleyda, laakiin weli waa inay noqotaa muuqaal xiiso leh oo muuqaal ahaan firfircoon. ”
Soosaarida Telemundo ee Abaalmarinta Muusikada Billboard Latin 2020, set-ka waxaa loo qaabeeyey afar marxaladood oo qaab-faneed ah, iyadoo soo-jeediyaha uu ku yaal bartamaha marxaladaha, sida ay sheegtay Mercado. “AGITO wuxuu ku fiicnaa nashqadeynta wareegtada ah. Waxay gacan ka geysan kartaa tallaalada marxalad kasta waxayna u rogi kartaa gudaha soo-jeediyaha inta ay socoto iyadoo la ilaalinayo masaafada jir ahaaneed. Runtii waxay gacan ka gaysatay badbaadada iyo guusha riwaayadda. ”
"Markii milkiilayaasheena AGITO ay guuleystaan, waan guuleysaneynaa," ayuu yiri Rob Drewett, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda iyo aasaasaha Mooshinka. Inaad awood u yeelatid inaad MTJIBS u gudbiso NASA oo aad aragto sida ay u isticmaaleen AGITO si ay uga caawiyaan hal abuureyaashu inay hal abuur badan yeeshaan waa sida saxda ah ee aan u abuurnay nidaamka. Way ka cidhiidhsan tahay kana gaaban tahay dolly dhaqameed waxayna soo gudbineysaa dhaqdhaqaaqyo aadan waligaa awoodin inaad sameyso ka hor. ”
Dhawaan, MTJIBS waxay arkeysay heshiis badan oo ah xR - Extension Reality, oo isku dhafan oo la kordhiyay iyo Mixed Reality - shaqada soosaarka muusikada.
Taylor ma arko waxsoosaarka oo dib ugu laabanaaya qaababkii safka hore u ahaa. Waxaan baranay farsamooyin cusub oo tikniyoolajiyad cusub leh. Waa mid ka mid ah sababaha aan markii horeba u iibsannay shirkadda 'AGITO'. Wax walba waxay ku soconayaan wadadaas waxaana diyaar u nahay mustaqbalka. ”
"Waan jecel nahay waxa kaydka u ah AGITO," ayay tiri Mercado. Mooshin aan macquul aheyn ayaa had iyo jeer soosaara tikniyoolajiyad cusub mustaqbalka. Anagana AGITO waxay naga caawineysaa kobcinta shirkadeena iyo furitaanka suuqyo cusub. ”
Previous: Hubinta waxay bixisaa aqoon isweydaarsi ku saabsan la qabsiga waxbarashada muusikada ee loogu talagalay 'COVID' iyo 'Dante' inta lagu gudajiray NAMM 2021
Next: Boostada Goldcrest waxay ku dareysaa halyeeyga Colorist Alex Berman